Posted by ညီရဲသစ် at 20:58
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) 16 December 2011 at 21:46
သားဇော သမီးဇော .. သမီးဇောက ပိုကြီးမယ်ဗျ ...း)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 16 December 2011 at 21:51
Candy 16 December 2011 at 22:51
မိဘမေတ္တာကို ဖော်ပြထားတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးနော်.. သဘောကျတယ်..
မျှော်လိုက်ရတာ.. အဟိ.. :D :D
သဒ္ဓါလှိုင်း 16 December 2011 at 23:18
သားသမီးတိုင်း စစ်မှန်တဲ့ မိဘမေတ္တာကို နားလည်နိုင်ကြပါစေ။ မိဘမေတ္တာဖေါ်ကျူးထားတဲ့ စာလေးက သားသမီးတွေရဲ့ ရင်ထဲကို ရောက်မှာပါ ညီရဲ။
လမင်းငယ် 16 December 2011 at 23:41
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 17 December 2011 at 00:21
သားမိုက်ဆိုပေမယ့် အမှားသိလို့ အမှန်ပြင်တဲ့ သားမိုက်ရဲ့ အိမ်ပြန်လမ်းတွေက အဓိပ္ပါယ် အပြည့်နဲ့ပါအကို...
Thameesan 17 December 2011 at 00:34
မဒမ်ကိုး 17 December 2011 at 08:59
ညီရဲရေ ပိုစ့်လေးက ကောင်းတယ်ဟေ့
ဘိုဖြူ 17 December 2011 at 13:38
သားမိုက်ရဲ့ အိမ်ပြန်လမ်းတွေက အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အ၀ပါပဲဗျာ
မိုးခါး 17 December 2011 at 13:54
ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ ..း) တခါတလေတော့လည်း မိဘနဲ့ သားသမီးကြား နားလည်မှုလွဲတာ ရှိတာပဲနော် .. ကိုယ်တိုင်ရော အပါအ၀င် :D
စံပယ်ချို 17 December 2011 at 17:03
မိဘမေတ္တာကို ဖော်ပြထားတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးမို့ သဘောကျနေမိတယ်
ပဥာက် 18 December 2011 at 00:14
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 18 December 2011 at 21:22
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိဘတွေနဲ့ အမြင်မတူကွဲပြားတာတွေ ရှိတတ်တော့ မကြာခန စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘဲ။ ခု အသက်ရလာတော့မှ မိဘမေတ္တာကို ပိုနားလည်လာပြီး အဖေအမေနဲ့ ပိုပြီးပြေလည်လာတယ် မိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘဲ ထားချင်တော့တယ်. အသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသိတတ်လာတာပါဘဲနော်။ ခုလို မိဘမေတ္တာအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရလေ မိဘကို ပိုနားလည်လာရလေပါဘဲ။
sosegado 19 December 2011 at 09:22
မိဘနှင့် သားသမီးကြားမှာ နာလည်းမှုက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ ဖတ်လို့ကောင်းပါသည်။
အင်ကြင်းသန့် 19 December 2011 at 11:18
ကျနော်တို့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက အမေရိုက်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး အမေ့ကို စကားမပြောဘူး....ငယ်သေးတော့ မိဘမေတ္တာကို နားမလည်တာပေါ့လေ....
မြသွေးနီ 19 December 2011 at 17:29
မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အမေ့အိမ်ပြန်ခဲ့တာလေးက သိပ်ကိူ ချစ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ အမေ့ရင်ခွင်လောက် နွေးထွေးတဲ့ နေရာ ဘယ်နေရာမှာမှ မရှိပါဘူးဆိုတာ ဒီပို့စ်လေးက ဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။
ညီလင်းသစ် 23 December 2011 at 20:07
သားသမီးနဲ့ မိဘ.. စိတ်ဆိုး၊ စကားများကြသည့်တိုင် မေတ္တာကြိုးတွေက ခိုင်မြဲတော့ နောင်တနဲ့ အချိန်မီ ပြန်ဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ တွေးမိတယ်၊ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားလို့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ...။